तीने महिने तालिम नलिई बिहे गर्न नपाइने नयाँ नियम ! - Kohalpur Trends
तीने महिने तालिम नलिई बिहे गर्न नपाइने नयाँ नियम !
इण्डोनेसियामा बिहे गर्नका लागि अब ३ महिनाको तालिम पास गर्नुपर्ने नियम सुरु हुँदैछ । मिडिया रिपोर्ट अनुसार इण्डोनेसिया सरकारले प्री-वेडिङ कोर्स अर्थात् विवाहपूर्व पाठ्यक्रम निःशुल्क रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
इण्डोनेसियाको मानव विकास तथा संस्कृति मन्त्रालय, धार्मिक मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा यो पाठ्यक्रम तयार पारेका हुन् ।
उक्त पाठ्यक्रममा युवाहरुलाई जीवनमा बिहे पश्चात् आउने परिवर्तनका विषयमा सचेतना प्रदान गरिनेछ । ताकि वैवाहिक जीवनका समस्याहरुलाई सहजै हल गर्न सकियोस् र दाम्पत्य जीवनका समस्याकै कारण सम्बन्ध नटुटोस् । साथै बिहेलाई कसरी सफल बनाउने र बालबच्चा कसरी हुर्काउने भन्ने कुरा पनि उक्त पाठ्यक्रममा सिकाइनेछ ।
यो कोर्स ३ महिनाको हुनेछ । यो पढाई पूरा नगरीकन कुनैपनि युवा बिहेका लागि योग्य हुनेछैन । अर्थात् जसले यो पाठ्यक्रमको पढाई पास गर्नेछ, उसले मात्र बिहे गर्न पाउनेछ ।
बिदा बस्नका लागि ७ वर्षसम्म गर्भवती
कामचोर मान्छेहरुले ठग्नका लागि अनेक बहाना बनाउँदछन् । कहिले बिरामी भएको निहुँ पार्ने त कहिले घरमा अत्यावश्यक काम पर्यो भनेर नआउने ।
भारतको बिहारकी एकजना महिलाले चाहिँ बिदा बस्नका लागि लगातार ७ वर्षसम्म सुत्केरी भएको निहुँ पारेकी छन् । पेशाले शिक्षिका ती महिलाले पछिल्लो ७ वर्षमा सातैपटक सुत्केरी भएको भन्दै बिदाको निवेदन दिएर बिदा बसिन् । उनी पछिल्लो सात वर्षदेखि बिदामा घर बसिरहेकी छन् । जब अघिल्लो सुत्केरी बिदाको अवधि सकिन थाल्दछ, तब उनले पुनः सुत्केरी भएको भन्दै बिदाको निवेदन स्कुलमा पठाउँछिन् ।
तर वर्षौंसम्म हरेक वर्ष सुत्केरी भएको भनेर बिदामा बसिरहेकी ती महिलामाथि पछिल्लोपटक विद्यालय प्रशासनले शंका गर्यो । त्यसपछि ती महिलामाथि सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्दा उनको कर्तुतको पर्दाफास भयो । वास्तवमा उनले बिदा बस्नका लागि सुत्केरीको झुटो बहाना बनाएको खुलेको छ ।
अन्ततः ती महिलाको ठगीको खुलासा भएसँगै विद्यालय प्रशासनले उनीमाथि कडा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।
Previous Previous post: कांग्रेस जाग्यो, कम्युनिष्टका विरुद्ध लड्छौं
Next Next post: सरकार आँखामा पट्टि र कानमा तेल हालेर सुतेको छ : चित्रलेखा यादव
४ माघ, गोरखा । दसैं‌ तिहारको समयमा जुवाको खालबाट बरामद गरिएको एक लाख रुपैयाँ बढी रकम जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र गुरुङले आफैंले राखेको खुलेको…
४ माघ, सिमकोट । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्षमाथि हातपात हुँदा उनी सख्त घाइते भएका छन् । श्रीनगरको सडकका विषयमा छलफल हुने क्रममा विवाद चर्किएपछि…